यी हुन् बजेटमा परेका प्रदेश ५ का योजना « Chhahara Online
यी हुन् बजेटमा परेका प्रदेश ५ का योजना
- १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
१५ जेठ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट पेश गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य, रोजागरी र कृषिमा जोड दिइएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा प्रदेश ५ का केही नयाँ र अधिकांश पुरानै योजनाहरु समावेश भएका छन् ।
प्रदेश राजधानीमा २५० आइसीयु बेडसहितको अस्पताल बनाउने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रदेश राजधानीमै ५० बेडका महामारी अस्पताल बनाउन बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रदेश राजधानीमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । वृहत दाङ सिचाईं, भेरी बबई, रानीजमरा बर्दिया सिचाईं आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ । राप्तीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ ।
नवलपरासीको धौवादीको फलामखानीमा जाने सडक निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाच चौकी निर्माण गरिने भएको छ । बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यो योजना चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको हो ।
बृह्त्तर लुम्बिनी गुरुयोजना, रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यी दुवै गुरुयोजना हालै बनाइएको हो । लुम्बिनीको ५ हजार क्षमताको ध्यान सभाहल निर्माण पूरा गर्न बजेट बिनियोजन भएको छ । तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
नौमुरे जलबिधुतको लगानी ढाचा निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन भएको छ ।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम बिनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी गराए । बर्दिया, दाङमा बाढी पहिरोमा घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ। बुटवलको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
घोराही–मुसिकोट, पोखरा–रिडी सडक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गसहितका तीन सडकलाई स्तरोन्नती गर्न ५ अर्ब बिनियोजन भएको छ । बुटवल(कोहलपुरसहितका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि आठ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।
गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र टर्मिनल भवन निर्माणमा बजेट राखिएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण र दाङको नारायणपुर बिमानस्थल स्तरोन्नतीमा बजेट छुटयाइएको छ । बाँकेमा निर्माणाधिन कारागार आगामी वर्ष सकिने भएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।